११ वर्षे बालिका गर्भवती भएपछि गाउँ निकाला | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-06-25T13:24:45.802890+05:45
११ वर्षे बालिका गर्भवती भएपछि गाउँ निकाला
personरातोपाटी संवाददाता access_timeसाउन २, २०७४ chat_bubble_outline0
भोजपुर– जिल्लाको पूर्वी अरुण गाउँपालिका–५ याकुकी ११ वर्षिया बालिका गर्भवती भएपछि गाउँ निकाल गरिएको छ । छिमेकी–२० वर्षिय दुर्गाबहादुर श्रेष्ठले ललाईफकाइ वालिकासँग शारीरिक सम्पर्क राखेपछि वालिका गर्भवती भएकी हुन् । गाउँनिकालापछि धरान पुगेकी बालिका साधना भने बिचल्लीमा परेकी छिन् । वालिकाको बुवा नेवार र आमा दलित समुदायको भएकोले केटा पक्षले दलितको छोरी नभित्राउने भन्दै धम्की दिएपछि वालिकालाई गाउँ निकाला गरिएको हो ।
बालिकालाई ७३ साल पौष ९ गते दुर्गाबहादुर श्रेष्ठले शारीरिक सम्बन्ध राखेका थिए । ‘छ महिनाको गर्भवती छोरीलाई डर र धम्कीको कारण गाउँनिकाला गर्नुप¥यो, बालिकाको बुवा खगेन्द्र श्रेष्ठले भने ।’ वालिकासंगै गएको केटाको अत्तोपत्तो छैन भने छोरी धरानमा अलपत्र पेरेकी छिन् । छोरीले कहिले कहाँ कहिले कहाँ पुगेर फोन गर्छे भोक भोकै छे रे ।’ वुवा खगेन्द्र श्रेष्ठले गहभरी आशु पार्दैै भने ।
अन्तरजातीय विवाहका कारण यो समाजले मलाई पनि न्याय दिएन खगेन्द्रले भने, ‘केटा पक्षले डरधम्की दिँदै सम्पतिको धाक र धम्की दियो । हामीलाई डर लागिरहेको छ केटा पक्षले केही गर्लाकी भनेर’ वुवा खगेन्द्रको गुनासो छ । स्थानीय पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयमा कक्षा–७ मा अध्ययनरत छोरी अहिले घर न घाटको भएपछि परिवार पीडामा डुबेको छ । उनले भने ‘गाउँ समाजले समाजबाट नै हटाउने कुरा गरे मैले केही बोल्न सकिन ।’
बालिकाको माइजु निलम घलेले बालिकालाई स्वास्थ्य परिक्षणका लागि लैजाँदा गर्भवती भएको पाइएको बताइन् । घलेले महिलाहरु समेत भएको भेलामा बालिकाको पक्षमा बोल्ने कोही नभएपछि केटाले बालिकालाई धरान लगेको बताइन् ।
प्रहरी चौकी याकुमा गएर सहयोग माग्दा समेत सहयोग नपाएको परिवारले बताएको छ । याकु प्रहरी चौकिका इन्चार्ज रमेश श्रेष्ठले भने केटीको बुवा आएर गाउँ समाज बसेर विहे गरिदिने निर्णय भए अनुसार विवाह गरिदिएको बताए ।
महिला विकास कार्यालय भोजपुरका पुष्पलता उप्रेतीले घटनाको विषयमा जानकारी पाएको र उनको परिवारलाई जिल्ला बोलाएको बताइन् । यस विषयमा बुझ्न केटा पक्षसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
सरकारले प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण गर्यो, आन्दोलन सशक्त पार्छु : डा. केसी
एसईईको नतिजा प्रकाशित : यस्तो छ नतिजा
गोरखाको धर्मवती घाटबाट शवसहित १७ जना मलामी प्रहरी नियन्त्रणमा !
जसलाई झुक्याएर मिर्गौला झिकियो, उसैलाई ‘मानव अंग प्रत्यारोपण मुद्दा’
भारत भ्रमणमा गएका कृषिमन्त्री के–के सम्झौता गरेर फर्किए ?
बनेपामा तरकारी बोक्ने गाडी पल्टियो, १ जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते
माली आक्रमणमा ३२ जना मारिए
जापानीज सनप्ले नेचुरलका सनस्क्रिन नेपाली बजारमा, उच्च तापक्रममा उपयोगी
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बालमैत्री घोषणामा आशंका
लहान नगपालिकाको बजेट १ अर्ब ३५ करोड
आजको संसद बैठकः ऊर्जा, परराष्ट्र र गृहको बजेटमाथि छलफल
धरानमा विमानस्थल बन्ने अनिश्चित
निक जोनासलाई भेटेपछि प्रियंका चोपडाकी आमाले यसो भनिन्
को पुग्ला नकआउट : पोर्चुगलसामु इरान तगारो, स्पेनलाई मोरक्कोको चुनौती
आइफाः श्रीदेवीको अवार्ड लिँदा रोए बोनी कपुर